သိန်း ၁ဝဝ ကျော်ကုန်မှာဖြစ်ပေမယ့် ၃၅ သိန်းနဲ့ ကျေးအေးပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - Tameelay
သိန်း ၁ဝဝ ကျော်ကုန်မှာဖြစ်ပေမယ့် ၃၅ သိန်းနဲ့ကျေးအေးပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက်ကတော့ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ထားတဲ့ ကားအက်စီးဒင့်မှာ သူမရဲ့ကား ရစကာမရှိအောင် ဘော်ဒီတစ်ခုလုံး ရှေ့နောက်
ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက် သိန်း ၁ဝဝ ကျော် ကုန်နိုင်ပေမယ့် ၃၅ သိန်းနဲ့ပဲ ကျေအေးပေးလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ခင်နှင်းဝေရဲ့ကားကို နောက်က သဲကားက တိုက်ခဲ့မိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားပိုင်ရှင်က လှည့်မကြည့်တဲ့အတွက် ဒရိုင်ဘာမိသားစုက ၃၅ သိန်းပဲ တက်နိုင်တာကြောင့် ၃၅ သိန်းနဲ့ပဲ ကျေအေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေတဲ့ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ ဧရာဝဏ်လမ်းပေါ်မှာ ခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်စီးဒင့်က ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းခဲ့သော်လည်း ခိုင်နှုးဝေနဲ့အတူ
ပါလာသူများ ဘာမှ ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက ပရဟိတတွေ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သဲကားဆိုတော့ ပိုင်ရှင်ဘက်က သိမ်မလျော်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ ကားမောင်းတဲ့လူဘက်ကလည်း မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့ပေါ့နော် သူတို့မှာလည်း ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ အစ်မတို့ကို
ပြောတာပေါ့နော်။ အစ်မကလည်း သူမကို မတရားကြီးလည်း လျော်ကြေးမတောင်းချင်ပါဘူး ဆိုပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ခိုင်နှင်းဝေက ဖြေဆိုထားပါတယ်။
သိနျး ၁ဝဝ ကြျောကုနျမှာဖွဈပမေယျ့ ၃၅ သိနျးနဲ့ကြေးအေးပေးလိုကျတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
သရုပျဆောငျ ခိုငျနှငျးဝတေဈယောကျကတော့ မကွာသေးခငျက ဖွဈထားတဲ့ ကားအကျစီးဒငျ့မှာ သူမရဲ့ကား ရစကာမရှိအောငျ ဘျောဒီတဈခုလုံး ရှနေ့ောကျ
ပကျြစီးခဲ့တဲ့အတှကျ သိနျး ၁ဝဝ ကြျော ကုနျနိုငျပမေယျ့ ၃၅ သိနျးနဲ့ပဲ ကအြေေးပေးလိုကျပွီလို့ သိရပါတယျ။ ခငျနှငျးဝရေဲ့ကားကို နောကျက သဲကားက တိုကျခဲ့မိတာ ဖွဈပါတယျ။
ကားပိုငျရှငျက လှညျ့မကွညျ့တဲ့အတှကျ ဒရိုငျဘာမိသားစုက ၃၅ သိနျးပဲ တကျနိုငျတာကွောငျ့ ၃၅ သိနျးနဲ့ပဲ ကအြေေးလိုကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝတေဲ့ အိမျနဲ့နီးတဲ့ ဧရာဝဏျလမျးပျေါမှာ ခုလိုဖွဈပှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အကျစီးဒငျ့က ထိတျလနျ့ဖှယျကောငျးခဲ့သျောလညျး ခိုငျနှျှုးဝနေဲ့အတူ
ပါလာသူမြား ဘာမှ ဒဏျရာမရခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ ပရဟိတတှေ ကွိုးစားလုပျဆောငျနတေဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
သဲကားဆိုတော့ ပိုငျရှငျဘကျက သိမျမလြျောနိုငျဘူးပေါ့နျော။ ကားမောငျးတဲ့လူဘကျကလညျး မိနျးမနဲ့ ကလေးနဲ့ပေါ့နျော သူတို့မှာလညျး ဘာမှမရှိဘူးဆိုပွီးတော့ အဈမတို့ကို
ပွောတာပေါ့နျော။ အဈမကလညျး သူမကို မတရားကွီးလညျး လြျောကွေးမတောငျးခငျြပါဘူး ဆိုပွီး အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ခိုငျနှငျးဝကေ ဖွဆေိုထားပါတယျ။
နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကစ်ကစ်ကို လိုအပ်တာတွေ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
ဒီနေ့…မကစ်ဆီကိုသွားတွေ့ပြီးလှူခဲ့ပါတယ်ရှင်…. ဖုန်းလည်းကြိုမဆက်ထားတော့…ကိုယ့်အသံကြားတော့အံသြဝမ်းသာသွားရှာတယ်…. တော်တော်လေးတော့ပြန်ကောင်းလာပါပြီ….သူခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းပြောပြတယ်….. စိုးပြည့်အသံကိုကြားဖူးတယ်လိှု့ထင်နေတာတဲ့….လူကတော့ဝါးဝါးဘဲမြင်ရတယ်တဲ့ စိုးပြည့်နဲ့အတူတူပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့we love အဖွဲ့ကိုလည်းသာဓုခေါ်ဆိုပါတယ်ရှင် Soe Pyae Thazin Facebook မှ Unicode >>> ဒီနေ့…မကဈဆီကိုသှားတှပွေီ့းလှူခဲ့ပါတယျရှငျ…. ဖုနျးလညျးကွိုမဆကျထားတော့…ကိုယျ့အသံကွားတော့အံသွဝမျးသာသှားရှာတယျ…. တျောတျောလေးတော့ပွနျကောငျးလာပါပွီ….သူခံစားရတဲ့ဝဒေနာတှလေညျးပွောပွတယျ….. စိုးပွညျ့အသံကိုကွားဖူးတယျလိှု့ထငျနတောတဲ့….လူကတော့ဝါးဝါးဘဲမွငျရတယျတဲ့ စိုးပွညျ့နဲ့အတူတူပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့we love အဖှဲ့ကိုလညျးသာဓုချေါဆိုပါတယျရှငျ Soe Pyae Thazin Facebook …
ဗီလိန်ဇာတ်ပို့နေရာများမှာ လူသိများပြီး အားပေးသည့် ပရိတ်များစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်လူတစ်ယောက်တော့ ခုရက်ပိုင်း အမွေကိစ္စကြောင့် ခေါင်းခြောက်နေရပါတယ်။ နိုင်လူက မိခင်မကွယ်လွန်ခင်ကလည်း အမေကိုချစ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဒုလ္လဘသင်္ကန်းဝတ်စဉ်ကလည်း မိခင်ကို ဆွမ်းခံကျွေးခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့မိခင်ကြီး ဆုံးသွာတာဟာ ခုဆိုရင် တစ်နှစ်တိတိ ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်က အမွေကိစ္စများကို …
တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကဖော်ပြခဲ့တဲ့ အလှဆုံးမြန်မာမင်းသမီး (၈)ဦး
တရုတ်နိုင်ငံက သတင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ www.md-zw.com က မြန်မာနိုင်ငံက အလှဆုံးမင်းသမီး (၈)ဦးစာရင်းကို ရွေးချယ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းအများစုကို တရုတ်ဘာသာနဲ့ ဖော်ပြပေးနေတဲ့ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူသုံးများတဲ့ Wechat app မှာလည်း Myanmar Chinese Network အမည်နဲ့ သတင်းတွေကို မျှဝေပေးနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် www.md-zw.com ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အာဘော်နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ အလှဆုံးမြန်မာမင်းသမီး …